Izihlungi zobhaka zama-aquariums: amamodeli asebenza kahle kakhulu futhi athule | Okwezinhlanzi
Izihlungi zobhaka be-Aquarium
Natalia Cherry | | Izesekeli
Izihlungi zobhaka ziyisinqumo esihle se-aquarium, enkulu noma encane, futhi akunandaba ukuthi ungumuntu wasemanzini olwandle emhlabeni wezinhlanzi noma onolwazi olukhulu. Angamadivayisi aphelele kakhulu ajwayele ukunikela ngezinhlobo ezintathu zokusefa, ngaphezu kwezinye izinto ezithakazelisa kakhulu.
Kulesi sihloko sizokhuluma ngezihlungi ezahlukahlukene zobhaka, ukuthi ziyini, ungazikhetha kanjani nokuthi yimiphi imikhiqizo ehamba phambili. Futhi, uma unentshisekelo kule ndaba futhi ufuna ukuzazisa ngokujulile, sincoma ukuthi ufunde le enye indatshana mayelana nayo izihlungi ze-aquarium.
1 Ukuhlunga okuhle kakhulu kojosaka kwama-aquariums
2 Siyini isihlungi sojosaka
3 Izinzuzo nezinkinga zalolu hlobo lwezihlungi
4 Imikhiqizo yesihlungi esihle kakhulu
5 Ungayikhetha kanjani isihlungi esikhwameni se-aquarium yethu
5.1 Izinhlanzi ze-Aquarium
5.2 Linganisa i-Aquarium
5.3 Uhlobo lwe-Aquarium
6 Siyini isihlungi esikhwameni esithule kunazo zonke?
7 Ungakwazi yini ukufaka okokuhlunga kojosaka ethangini lezinhlanzi?
Ukuhlunga okuhle kakhulu kojosaka kwama-aquariums
ICrocci 104I-CR / A6076863 ...
ISIHLUNGI SOKUYISELELA ...
Ubhaka we-AstroAqua-Hlunga ...
Isihlungi se-AKKEE Aquarium, ...
Siyini isihlungi sojosaka
Izihlungi zobhaka zingenye yezinhlobo ezidume kakhulu zezihlungi ze-aquarium. Njengoba igama labo liphakamisa, balengiswa kolunye lwemiphetho ye-aquarium, njengobhaka. Ukusebenza kwawo kulula, ngoba bamane bamunce amanzi bese bewadlula kwizihlungi zabo ngaphambi kokuwaphonsa, njengokungathi kuyimpophoma, babuyele ethangini lezinhlanzi, selivele lihlanzekile futhi lingenakho ukungcola.
Izihlungi zobhaka Imvamisa kufaka izinhlobo ezintathu ezihlukile zokuhlunga eziphethe ukwenza ukuhlunga okuvame kakhulu okudingwa ama-aquariums. Ekuhlungeni ngomshini, owokuqala lapho amanzi adlula khona, isihlungi sisusa ukungcola okukhulu kakhulu. Ekuhlungweni kwamakhemikhali, izinhlayiya ezincane kakhulu ziyasuswa. Ekugcineni, ekuhlungeni kwezinto eziphilayo kwenziwa isiko lamagciwane aguqula izinto eziyingozi ezinhlanzini zibe ezingenabungozi.
Izinzuzo nezinkinga zalolu hlobo lwezihlungi
Izihlungi zobhaka zinenombolo ye- izinzuzo nezinkinga lokho kungaba wusizo lapho ukhetha ukuthi ungathola isihlungi salolu hlobo noma cha.
Lolu hlobo lokuhlunga lune- inani elikhulu lezinzuzo, ikakhulukazi maqondana nokusebenza kwayo okuhlukahlukene, okwenza kube isenzo esifanelekile kunoma yikuphi ukuqala:
Ziyi- umkhiqizo ophelele kakhulu kanye nokusebenza okuguquguqukayo okukhulu okuvame ukufaka izinhlobo ezintathu zokuhlunga esiziphawulile (ngomshini, ngamakhemikhali nangokwezinto eziphilayo).
Bajwayele ukuba ne- Inani elilungisiwe.
Bakhulu kakhulu kulula ukuhlangana nokusebenzisaKungakho banconyelwa kakhulu abaqalayo.
Ungathathi isikhala ngaphakathi kwe-aquarium.
Ekugcineni, ngokujwayelekile ukugcinwa kwayo akubizi kakhulu (ngokwesikhathi, amasonto amabili noma ngaphansi ngokuya ngomthamo kanye nokungcola okuqongelela e-aquarium, nemali).
Noma kunjalo, lolu hlobo lokuhlunga nalo inokubi okuthile, ikakhulukazi ehlobene nezinhlobo ezibonakala zingakubekezeleli kanye nezinye:
Lolu hlobo lwezihlungi azinconyelwa ama-aquariums anama-prawn, kwazise bangazincela.
Ku- Izinhlanzi ze-betta nazo azinantshisekonjengoba isihlungi sibangela umsinga wamanzi okunzima kuwo ukubhukuda.
El isihlungi samakhemikhali kuthanda ukungabi muhle kakhulu noma, okungenani, ukunganikeli imiphumela emihle njengezinye ezimbili.
Ngokufanayo, okokuhlunga kojosaka kwesinye isikhathi azisebenzi kahlenjengoba bekwazi ukukhiqiza kabusha amanzi abasanda kuwakha.
Imikhiqizo yesihlungi esihle kakhulu
Emakethe singathola izinhlobo ezintathu zezindlovukazi uma kukhulunywa ngezihlungi zobhaka lokho kuzophatha ukuhlunga amanzi ku-aquarium yakho kuze kubonakale njengamajethi egolide.
Sivele sikhulume nge- Izihlungi ze-AquaClear muva nje. Akungabazeki ukuthi ngumkhiqizo onconywe kakhulu ngawo womabili ama-aquarists ochwepheshe nabasanda kuqalwa. Yize kuvela ukuthi inenani eliphakeme ngaphezudlwana kunezinye, ikhwalithi yemikhiqizo yayo ayinakuphikwa. Izihlungi zayo zehlukaniswe ngokwamandla wamalitha amanzi ku-aquarium yakho. Ngaphezu kwalokho, baphinde bathengise izingxenye ezisele zokuhlunga (izipanji, amalahle ...).
Izihlungi zalo mkhiqizo bangasebenza iminyaka kanye nosuku lokuqala. Kuzofanele wenze isondlo esifanele ukuze injini ingashi.
Isihlungi sangaphandle se-Eheim ...
Umkhiqizo waseJalimane lokho ihamba phambili ekwenzeni imikhiqizo ehlobene namanzi, kungaba ama-aquariums noma izingadi. Izihlungi zayo, okokuhlanza amatshe, okokucacisa, okokuphakela izinhlanzi noma okufudumeza emanzini kugqame ikakhulukazi. Kungumkhiqizo othakazelisa kakhulu ongagcini ngokuthengisa amadivayisi, kepha futhi nezingxenye ezivulekile nemithwalo yezihlungi zawo.
Kuyathakazelisa ukuthi amaphampu amanzi alo mkhiqizi, ekuqaleni ayenzelwe ama-aquariums, nawo ayatholakala kusetshenziswa kokuqukethwe kwekhompyutha kumaseva apholile ngomsindo oqhubekayo, ophansi nangendlela ephumelelayo.
UTidal unjalo omunye umkhiqizo wekhwalithi ephezulu esingathenga ngawo izihlungi zobhaka i-aquarium yethu. Kuyingxenye yeSeachem, ilabhorethri e-United States enikezelwe ikakhulukazi kumikhiqizo yamakhemikhali, ngokwesibonelo, izikhuthazi, izilawuli ze-phosphate, ukuhlolwa kwe-ammonia ..., yize ifaka namaphampu wamanzi noma izihlungi.
Izihlungi zeTidal zidume ngokunikela ngezici ezingafakiwe kweminye imikhiqizo okokuhlunga, isibonelo, izinga lamanzi eliguquguqukayo noma isikhucululi semfucumfucu enqwabelana ebusweni bamanzi.
Ungayikhetha kanjani isihlungi esikhwameni se-aquarium yethu
Ukukhetha isihlungi sojosaka esihlangabezana nezidingo zethu nalezo zezinhlanzi zethu nakho kungaba yinselele. Kungakho sikunikeza lokhu uchungechunge lwamathiphu okufanele uwagcine engqondweni:
Ngokuya ngenhlanzi esinayo e-aquarium, sizodinga uhlobo oluthile lokuhlunga noma olunye. Isibonelo, njengoba sishilo, gwema okokuhlunga kojosaka uma unenhlanzi eyimfanzi noma i-betta, ngoba ayizithandi nhlobo lezi zihlungi. Ngakolunye uhlangothi, uma unezinhlanzi ezinkulu ezingcolile kangako, khetha okokuhlunga kojosaka okunokuhlunga okunamandla. Ekugcineni, ukuhlunga okuhle kwebhayoloji kubaluleke kakhulu kuma-aquariums anezinhlanzi eziningi, ngoba uma kungenjalo ibhalansi entekenteke yemvelo ingonakaliswa.
Isilinganiso se-aquarium ngu kubaluleke ngokulinganayo lapho ukhetha okokuhlunga okukodwa noma okunye. Kungakho kubaluleke kakhulu ukuthi, ngaphambi kokuthatha isinqumo ngemodeli eyodwa noma enye, ubala ukuthi i-aquarium yakho inamakhono anjani nokuthi udinga isihlungi esingakanani ukucubungula ngehora ukuze uyigcine ihlanzekile. Ngendlela, izihlungi zobhaka zilungele ikakhulukazi ama-aquariums amancane naphakathi. Ekugcineni, futhi kuwumqondo omuhle ukubheka ukuthi uzobeka kuphi i-aquarium, ngoba isihlungi sizodinga isikhala esincane onqenqemeni, ngakho-ke akulimazi ukubheka izilinganiso uma, ngokwesibonelo, i-aquarium ebhekene nodonga.
Empeleni uhlobo lwe-aquarium aluyona inkinga yokuhlunga ubhaka, kunalokho, ngoba ngenxa yokuguquguquka kwazo zilingana kahle kunoma iliphi igumbi. Kunconyelwa ngisho nezindawo ezinamanzi ezitshaliwe, ngoba ishubhu abamunca ngalo amanzi kulula kakhulu ukufihla okhula. Kodwa-ke, khumbula ukuthi okwenziwe yilezi zinhlobo zezihlungi kunamandla impela.
Siyini isihlungi esikhwameni esithule kunazo zonke?
Kubaluleke kakhulu ukukhetha ifayela le- isihlungi esithule uma kwenzeka ungafuni ukucindezela izinhlanzi zakho… Noma ngisho ngokwakho, ikakhulukazi uma une-aquarium esethwe egumbini. Ngalo mqondo, izinhlobo ezigqama kakhulu ngokunikela ngezihlungi ezithulile yi-Eheim ne-AquaClear.
Noma kunjalo, noma kunjalo isihlungi singakhipha umsindo futhi sicasule noma singenaphutha. Ukukugwema:
Nikeza injini isikhathi esithile sokujwayela. Ezinsukwini ezimbalwa ngemuva kokukhishwa kwesihlungi esisha, injini kufanele iyeke ukubanga umsindo omkhulu.
Bheka lokho alikho itshe noma iyiphi insalela ebambekile lokho kungadala ukudlidlizela.
Ungakwazi futhi faka okuthile phakathi kwengilazi nesihlungi ukugwema ukudlidliza.
Uma okukukhathazayo impophoma yamanzi ahlanzekile aphuma kusihlungi, zama ukugcina izinga lamanzi liphezulu impela (kuzofanele uphinde ugcwalise njalo ezinsukwini ezintathu noma ezine) ukuze umsindo wempophoma ungabi namandla kangako.
Ungakwazi yini ukufaka okokuhlunga kojosaka ethangini lezinhlanzi?
Yize kunezihlungi zobhaka ezenzelwe ngokukhethekile ama-nano aquariums, iqiniso ukuthi lokho ethangi lenhlanzi ngesihlungi sesipanji siyoba nokwanele. Njengoba sishilo ngenhla, izihlungi zempophoma zibangela umsinga onamandla ongathikameza izinhlanzi zethu noma uzibulale, isibonelo uma ziyizinhlanzi noma izinhlanzi zezingane.
Kungakho kungcono kakhulu ukuthi sikhethe i- isihlungi sesiponji, ngoba ayinayo ipompo lamanzi elingagwinya izinhlanzi zethu ngephutha, into amathuba ayo akhuphuka ngokubonakalayo lapho isikhala sincane. Izihlungi zesiponji yilokho kanye okukhonjiswa igama lazo: isiponji esihlunga amanzi nokuthi, ngemuva kwamasonto angaba mabili okusetshenziswa, siphinde sibe isihlungi sebhayoloji, ngoba sigcina siqukethe amabhaktheriya alusizo emvelweni wamathangi ezinhlanzi.
Ngakolunye uhlangothi, Uma unethangi elikhulu lenhlanzi, kunezihlungi ezinenjini, kodwa yenzelwe izindawo ezinamanzi amancane kakhulu.
Sithemba ukuthi sikusizile ukuthi uqonde kangcono umhlaba wezihlungi zobhaka ngale ndatshana. Sitshele, wake walusebenzisa lolu hlobo lokuhlunga i-aquarium? Kube yini isipiliyoni sakho? Ingabe uncoma noma imuphi umkhiqizo noma imodeli ethile?
Indlela ephelele ye-athikili: Okwezinhlanzi » Izesekeli » Izihlungi zobhaka be-Aquarium
6 imibono yokuhlobisa i-aquarium